अनुत्तरित यी प्रश्नहरू
तराईको गर्मीलाई थप ऊर्जा दिन बिहानैदेखि घाम चरक्क चर्केको थियो । पानी पर्ने रत्तिभर छनक थिएन । त्यही गर्मीसँग मनमनमा गनगनाउँदै म सब्जी किन्न निस्किएकी थिएँ । यस्तै साढे ७ बजेको हुँदो हो । नजिकको सब्जी पसल नै खुलेको रहेनछ । अलि परै पुग्नुपर्ने भयो ।
बाटोमा अचानक एक जोर आँखा मेरो आँखासँग ठोक्किन आइपुगे । मलाई ती आँखा कताकता देखेको जस्तो लाग्यो । सम्झिने कोशिस गरेँ । झट्ट याद आयो र ममा आश्चर्य र कौतुहलताको दोभान आएर स्वाट्ट मिसियो । किनकि तिनै आँखाले केही समय अघि मेरो मस्तिष्कमा हुण्डरी मच्चाएको थियो ।
लामो कोष तानेर आँखामा गाजल लगाएकी ऊ त्यही केटी थिई जसले एक कार्यशाला गोष्ठीमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग सम्बन्धी आश्चर्यजनक आफ्नो अनुभव र धारणा निसङ्कोच सेयर गरेकी थिई । त्यो सुनेर हामी चित खाएका थियौं । मैले सम्झिइसक्दा त्यो केटी मबाट ‘क्रस भएर’ गइसकेकी थिई । फर्केर हेरेँ अलिकति पर पुगिसकिछ ।
साहस गरेरै बोलाएँ । बैनी ! ए बैनी !! उसले फर्केर हेरी । ‘एकछिन पख्नुस् त’ भन्दै म ऊतिर लम्किएँ । उ कसलाई भनेको हो, मलाई हो कि होइन जस्तो गरी आफ्नो वर्तिर पर्तिर हेर्दै थिई । मैले तपाईलाई नै बोला’को हो भनेँ ।
ऊ रोकिई ।
‘मलाई चिन्नुभो ? हामी फेथ संस्थाले राखेको कार्यशाला गोष्ठीमा भेट भएका थियौँ । हामी सँगै कार्यक्रममा भाग लिएको होइन’, मैले उसलाई सोधेँ ।
उसले सम्झिएजस्तो गरी ‘ए हो याद आयो तपाईहरू क्याम्पसबाट आउनुभा’थ्यो होइन’, भनी । ऊ वरपर हेर्दै मबाट फुत्किन हतार गर्न थाली । मैले ‘प्लिज बैनी एकैछिन समय लिन्छु न है अलिकति गफ गर्न चाहन्छु’ भनेँ । उसले अलि आपत्ति जनाएजस्तो गरी ।
मैले तपाईंले केही अप्ठेरो नमान्नु भनेपछि अलि सहज भई । मैले छेउकै चिया पसलमा बस्ने इशारा गरेँ । उसले सङ्कोच मानेजस्तो गरी । छेउकै अर्काे कोल्ड स्टोरनेर तल्लो साइडमा राखेको बेन्चमा बस्यौं । तीज नजिकै आएकाले रातो कपडा लगाउने महिलाहरू बिहानैदेखि सडकमा देखिन्थे । घरीघरी तिनको नजर हामीतिर पथ्र्याे । ती नजर केही बिलकुल अपरिचित त केही परिचित हुन्थे । त्यहाँ अरु ग्राहक थिएनन् । पसलवाला भने सरसफाईमा व्यस्त थियो । दुइटा फेन्टा अर्डर गरेँ । फेन्टा पिउँदै मैले नै कुरा प्रारम्भ गरेँ ।
‘बहिनीको घर चाहिँ कता हो ?’
ऊ भन्दै गई । उसको घर खोटाङको दोर्पा रहेछ । आमा तामाङ र बाबु चौहान क्षेत्री । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको उसको परिवारमा एक दाजु, एक भाइ र एक दिदी रहेछन् । दिदी र दाजु दुवैको बिहे भइसकेको रहेछ ।
रोगाएकी आमालाई वास्ता गर्न छाडेछन् बाले । घरमा कम बास हुन थालेछ । एकदिन गाउँभर हल्ला चल्यो । चौहान गाउँको धने चौहानले राईगाउँकी हाङ्दिमालाई लिएर भाग्यो रे ।
‘आँखा फुटेकी छँडौली, कोही नभेटेर बाजेजस्तो धने चौहान देखी । थुइक्क !’ हाङ्दिमा र बाले सिमाना काटे । फर्केर आएनन् । दाइ भाउजूले रोगी आमाको हेरचाह गरेनन् त्यसैले हाल आफैसँग राखेर उपचार ओखतीमुलो गर्दैछु भनी उसले बताई । ‘हप्तामा दुइटा अस्थालिन ग्यास (इन्हेलर) ले पुग्न गाह्रो पर्छ । खाने औषधी छुट्टै छ । त्यतिले नपुगेर बाफ लाइरहनुपर्छ मेडिकलमा लगेर । भाइलाई स्कुल हालिदिएँ तर पढेन अहिले पढाइ छोडेर दिदीसँगै बस्दैछ,’ भनी । अनि अहिले किन कसरी यता त भनेर सोध्दा आमालाई भेट्न आएकी । दिदीलाई बेलटारको बस चढाउन आएको भनी ।
आमा ६ वर्षदेखि दमको रोगले थला बसेको र खोटाङबाट इटहरी झरेको साढे दुई वर्ष भएको उसले बताई । गाउँकै बडाबाको छोरा भनाउँदो दाजु पर्नेले शहरमा राम्रो काम लगाइदिन्छु भनी ल्याएको र यस्तो नर्कमा फसाएको उसको भनाइ थियो ।
शहरमा त सुख होला भन्ने ठानेर पढाइ पनि छाडेर आएको उसले बताई । ती दाइ कता गए भनी सोध्दा यतै तराईमै बस्छ भनी । ‘कहिले धरान, कहिले इटहरी, कहिले काँकरभिट्टा जान्छ । मेरो हरेक कामबाट कमिसन लिन्छ र ग्राहक पनि खोज्छ’ भनी । ‘कहिले कता, कहिले कता पठाउँछ । हाम्रो डेराको बन्दोबस्त ऊ आफँै मिलाउँछ । केही कतै शङ्का लाग्यो ऊ आफैँ डेरा सारिदिन्छ । भागेर गाउँ जाँदा पनि धर दिएन । अनेक डर धम्की र त्रास देखाएर यही पेशामा पिल्सिन बाध्य बनायो । अब के गर्ने अरु उपाय छैन । पापी पेट पाल्नै प¥यो । यस्तो काम त कसैले नगरोस् । छोडेर अरु काम खोज्दा कसैले राम्रो र इज्जतिलो काम दिन्नन् । कहिले त एक रातमै दुई÷तीन जना ग्राहकसँग पठाउँछन् । जीउ थिलथिलो हुन्छ,’ यति भन्दाभन्दै उसको आँखा रसिलो देखियो ।
मैले गफको सिलसिला अन्तै मोडेँ । तीजको मौसम थियो त्यहीँबाट शुरु गरेँ । ‘तिमी तीज नमनाउने ?’ ऊ अलि लामो सास छोडेर बोली, ‘कहाँ आउँछ र हामीलाई तीज ? मेरो अरु दुई जना साथी पनि छ एउटी चौधरी र अर्काे तामाङ्नी । ओखलढुङ्गाको एउटा गुरुङ्नी पनि थियो । उसको बोजु उहिले राणाको दरबारमा बसेको रे । पढाइको महत्व बुझेको । त्यही भएर नातिनीलाई सदरमुकाममा पढ्न पठा’को र’छ । दलालले प्रेमको चङ्गुलमा फसाएर यस्तोमा ल्याएर जाकिदिएछ । धेरैजसो रोइरहन्थी ।
तीन महिना त यस्तै काम गरी । साहुले प्रायजसो दिनभर कोठामै फकाएर राख्थ्यो । कोठामै ग्राहक पठाउँथ्यो । गाउँकै एकजना मीतमामा पर्ने पश्चिमतिर डाइभर गर्दा रहेछन् । ग्राहक भएर आउँदा चिनेर घरमा खबर गरिदिएछ । गाउँबाट आफ्नो मान्छे आएर घर लग्यो रे । अहिले मसँग सम्पर्कमा छैन’ भनी । हामीलाई न तीज आउँछ न तिहार, न माघी आउँछ न ल्होसार । चाडबाड त हाम्रो लागि आएकै होइनन् भनी ।
मैले सोधेँ, ‘जीवन यसरी नै बित्छजस्तो लाग्छ ? बिहे गर्ने, घरजम गर्ने रहर लाग्दैन ? आजसम्म कोही न कोही त माया गर्ने मान्छे पनि भेट्यौ होला नि ?’
झरी चुहुन लागेकोजस्तो आँखालाई स्कार्फले पुछ्दै ऊ बोली, ‘बिहे गर्ने रहर लाग्छ नि किन नलाग्नु ? बच्चा जन्माउनु, स्याहार गर्नु मन पर्छ । मलाई छोरी मन पर्छ’ भनी । किन ? भनेर मैले सोधेँ । ऊ अलि गम्भीर हुँदै बोली । छोराले भन्दा छोरीले आमाबाउलाई माया गर्छ र हेर्छन् पनि ।
‘तर हामीलाई कस्ले गर्ने बिहे ? जो पनि बासना मेटेपछि निचोरेको कागतीको खोस्टा मिल्काएजस्तो मिल्काउँछन् । उमेर ढलेका बुढाहरू त झन् हरामी हँुदार’छन् एकरत्ति दया नराखी गिद्दले लुछेझैँ लुच्छन् । अनि कसले गर्ने हामीलाई माया ? जन्मिँदै किन मर्न सकिएनजस्तो लाग्छ ? जानाजान मर्न पनि नसकिँदोर’छ । आत्महत्या पनि गर्न नसकिँदोर’छ केही न केही त्यान्द्रोले अल्झाइरहने गर्छ ।’
यति भनिसक्दानसक्दै उसको परेलीको बाँधले आँशुको भेल थाम्न सकेन । दुई आँखाबाट अरुण र तमोर बगे । अनायसै द्रबित भइगएँछु म पनि । शब्द घाँटीमै अड्किए । म केही बोल्न सकिनँ । आमालाई औषधी दिनु छ भन्दै आँशु पुछेर ऊ जान हतार गरी । मैले फेन्टाको पैसा तिर्दै गर्दा ऊ त्यहाँबाट हिँडिसकिछ ।
मन एकतमासले अमिलो भयो । ऊ गएको बाटोतिर हेरेँ । अघि नै ओझेल भइसकिछे । वस्तुसमान शरीर क्रयविक्रयको दलदलमा भासिएर रछ्यानको कीराजस्तो बाँच्न अभिशप्त यस्ता नारीहरूको नारकीय जीवन सम्झिँदै गहुँ्रगो पाइला लिएर सब्जी पसलतिर लागेँ । हजारौ प्रश्नहरूले मन कोपर्न थाल्यो । बर्सेनी लाखौंको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिन्छन् । कोही खाडीमा मजदुरी गर्छन् भने कोही युरोपको शहरमा नोकरी गर्छन् । तर जसले जहाँ जे गरे पनि फर्केर आउँदा समाजमै आउँछन्, सहानुभूति पाउँछन् । सम्मान पनि पाउँछन् । तर बर्सेनी लाखौंको सङ्ख्यामा भारत तथा विदेशका विभिन्न वेश्यालयहरूमा बेचिने चेलीहरू न फर्केर आउँछन् न त फर्के आउनेले समाजमा इज्जत पाउँछन् । न त सहानुभूति न त सम्मान नै पाउँछन् न त स्वस्थ र सग्लो नै आउँछन् । कतिले स्वदेशमै शरीर बेचेर पेटको आगो निभाउँछन् ।
केही यौन उन्मादको ज्वाला शान्त पार्न त्यसरी गलत बाटो समात्ने पनि होलान् । तर तिनले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । तिनलाई पनि पेटको भोक अनि राम्रो लाउने, मिठो खाने र सम्पत्ति जोड्ने शौख र अनि गरिबीको रोगले नै त कुदाएको हो । कतिलाई सानासाना चारित्रिक भुलका कारण समाजले तिरस्कार गरेर पनि यस क्षेत्रमा लागेका हुन्छन् ।
आखिर यसको जिम्मेवार को हो त ? स्वयम् ती अबोध बालाहरू हुन् ? यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा के यो समाज दोषी छैन ? जहाँ धर्म र परम्पराका नाउँमा नारी दलनका अनेकौँ प्रथाहरू थिए र छन् । जस्तो कि सती प्रथा, बिधवा प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, कमलरी प्रथा, छाउपडी प्रथा दाइजो प्रथा आदि । के यो दशको शिक्षा दोषी छैन ? जसमा अबोध बालिकाहरूलाई त्यस्ता कहालीलाग्दा दुर्घटनाबाट जोगिन सजग र सचेत गराउने खालका पाठ्यक्रमहरू समावेश गरिएको छैन ।
के यो देशको शासन व्यवस्था दोषी छैन ? जसले दस्ताबेजमा मात्र लैङ्गिक समानताका नारा घन्काई सदियौंदेखि घरबारदेखि दरबारसम्म, सडकदेखि सदनसम्म मजबुर महिलाहरूमाथि हरक्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइराखे । के देशको सरकार दोषी छैन ? जसले राष्ट्रको भकारी रित्याउने भत्तावाद र भ्रष्टाचारलाई कहिले निर्मूल गर्न सकेन र ९५ प्रतिशत जनता गरिबीको जाँतोमा पिसिइरहनुप¥योे । के यो पुरुषसत्ता दोषी छैन ? जहाँ हजारौं कोपिला र फूलहरू फक्रिन नपाउँदै बलात्कार र यौन शोषणको शिकार हुनुपर्दछ भने कतिले अनाहकमा ज्यान फाल्नुपर्दछ । तर कानुन र शासन व्यवस्थाले तिनीहरूकै संरक्षण र बचाउ गर्छ । कति गरुँ ? मस्तिस्क र मुटु चिथोर्ने यस्ता हजारौं प्रश्नहरू छन् ।